Jirama Toamasina : Mpiasa iray maty am-perinasa, misy misompatra ny tambajotrany
Vous êtes ici: Accueil → Faits-Divers → 2016 → octobre → 25 → Jirama Toamasina : Mpiasa iray maty am-perinasa, misy misompatra ny tambajotrany
Redaction Midi Madagasikara 25 octobre 2016 0 Commentaire
Miaina ao anatin’ny olana ny Jirama Toamasina tato ho ato izay, satria miverina indray ny fahatapatapahan’ny herinaratra amin’ny fokontany maro, nefa ny vokatra omen’ireo fitaovana vaovao sy ny teo aloha ary ireo orinasa miara-miasa aminy manana amby amin’izay omeny isan’andro.
Raha ny fanazavana nataon’ny talem-paritanin’ny Jirama Toamasina, Veloson Léonard, izay nitondra ny mpanao gazety nijery ifotony ny tena zava-misy marina, dia misy misompatra mitoraka amina tariby ny tariby mpitarika herinaratra maherivaikan’ny Jirama ao Tsarakofafa Toamasina Suburbain. Hain’ireo olona manao ny hasomparana tsara ny fomba atao mampirefotra ny herinaratra ka mahatapaka ny jiro eto Toamasina, ary mazana isaky ny alina no anaovan’izy ireo izany. Nambaran’ny talem-paritanin’ny Jirama Toamasina fa nateti-pitranga izao ankasomparana izao nanomboka ny faramparan’ity herinandro ity, ka mazana dia ny alina tena ilain’ny vahoaka ny herinaratra no ataon’izy ireo izany.
Main’ny herinaratra. Vokatr’io fahatapatapahan’ny herinaratra ataona andian’olona manao ankasomparana io, dia nisy fitaovana tsy maintsy nasiam-panamboarana tao amin’ity tranon-jiro iray tao Bazary be ity. Nisy mpiasa vao roa taona teo anivon’ny Jirama Toamasina antsoina hoe Paulin 31 taona ity, noho izy isan’ireo teknisiana niasa alina tamin’io sabotsy io. Tonga anefa ny tsy nampoizina satria raha mbola eo am-panamboarana ireo fitaovana nisy olana ny tenany dia novelomin’ny namany tampoka ny herinaratra, ka tratran’ny herinaratra maherivaika tamin’izany ny tenany ary maty teo noho eo izy, nivadika mainty tanteraka ny vatany taorian’izay. Efa mandeha ny fanadihadiana ankehitriny.
Misy resaka politika mba hisian’ny fihetsehan’ny vahoaka izay efa niteraka faty olona teo aloha ve ao ambadika? Tsy namaly izany ny tale fa nilaza sy nanamafy kosa fa hiezaka amin’ny heriny ny jirama miara-miasa amin’ny mpitandro ny filaminana hanafay ireo andian’olona mpisompatra ireo, izay mety hiteraka fahasimbam-pitaovana eo anivon’ny jirama sy any an-tokantranon’ny mpanjifa.